Ithegi: iintsingiselo | Martech Zone
I-Python: Iskripthi Isicatshulwa esikhutshiweyo sikaGoogle sokuKhangela kwiNiche yamagama aphambili okuKhangela
NgoMvulo, Matshi 29, 2021 NgoMvulo, Matshi 29, 2021 UOsman Sirin
Wonke umntu uyayithanda iTrend Trends, kodwa iyinkohliso xa isiza kwiLig Tail yamagama aphambili. Sonke siyayithanda inkonzo esemthethweni kuGoogle yokufumana ulwazi kwindlela yokuziphatha. Nangona kunjalo, zimbini izinto ezithintela uninzi ekusebenziseni umsebenzi oqinileyo; Xa ufuna ukufumana amagama amatsha angama-niche, akukho datha yaneleyo kwiGoogle Trends ukunqongophala kwe-API esemthethweni yokwenza izicelo kuGoogle iintsingiselo: Xa sisebenzisa iimodyuli ezinje ngee-pytrends, emva koko kufuneka
NgeCawa, ngoMatshi 7, 2021 NgoLwesihlanu, Matshi 12, 2021 UAleh Barysevich
Umxholo uyinkosi - wonke umthengisi uyayazi loo nto. Nangona kunjalo, amaxesha ngamaxesha, abathengisi bomxholo abanakho ukuthembela kwizakhono zabo kunye neetalente- kufuneka babandakanye amanye amaqhinga kwisicwangciso sabo sokuthengisa umxholo ukuze sibe namandla ngakumbi. Ukumamela ekuhlaleni kuphucula isicwangciso-qhinga sakho kwaye kukunceda uthethe ngqo kubathengi ngolwimi lwabo. Njengomthengisi wentengiselwano, uyazi ukuba isiqwenga somxholo sichazwa ngamanqaku amabini: Umxholo kufuneka uthethe nawo
Iindlela ezi-5 eziPhezulu kuLawulo lweeAsethi zeDijithali (i-DAM) ezenzeka ngo-2021
NgoLwesithathu, ngoFebruwari 10, 2021 NgoLwesithathu, ngoFebruwari 10, 2021 U-Amalie Widerberg
Ukuhamba uye kwi-2021, kukho inkqubela phambili eyenzekayo kushishino lweDigital Asset Management (DAM). Kwi-2020 sabona utshintsho olukhulu kwimikhwa yokusebenza kunye nokuziphatha kwabathengi ngenxa ye-covid-19. NgokukaDeloitte, inani labantu abasebenza emakhaya liphindwe kabini eSwitzerland ngexesha lobhubhane. Kukho nesizathu sokukholelwa ukuba le ngxaki izakubangela ukonyuka okusisigxina emsebenzini okude kumhlaba wonke. UMcKinsey ukwangeengxelo zabathengi abatyhalela phambili
Iindlela ezingama-2021 zoNxibelelwano ngeDijithali eziya kuthi zikhuthaze ishishini lakho
NgoMvulo, nge-7 kaDisemba ngo-2020 NgoMvulo, nge-7 kaDisemba ngo-2020 UJeroen Van Glabbeek
Ukuphuculwa kwamava abathengi kuye kwaba yinto engenakuthethathethwano kumashishini afuna ukutsala nokugcina abathengi. Njengokuba ilizwe liqhubeka nokungena kwindawo yedijithali, amajelo amatsha onxibelelwano kunye namaqonga edatha aqhubela phambili enze amathuba emibutho yokuphucula amava abathengi bayo kunye nokuziqhelanisa neendlela ezintsha zeshishini. U-2020 ibingunyaka ogcwele sisiphithiphithi, kodwa ikwayinto ebangela ukuba amashishini amaninzi ekugqibeleni aqalise ukwamkela idijithali- nokuba
Iitekhnoloji zeTekhnoloji ezi-6 ngo-2020 Yonke iMarketer kufuneka uyazi ngayo
NgoLwesine, Meyi 7, 2020 NgoLwesithathu, Meyi 6, 2020 UChristina Lyon
Akusiyo imfihlo ukuba iindlela zentengiso zivela notshintsho kunye nezinto ezintsha kubuchwepheshe. Ukuba ufuna ukuba ishishini lakho ligqame, ungenise abathengi abatsha kwaye wandise ukubonakala kwi-Intanethi, kuyakufuneka usebenze malunga notshintsho lwetekhnoloji. Cinga ngeendlela zobugcisa ngeendlela ezimbini (kwaye ingqondo yakho iya kwenza umahluko phakathi kwemikhankaso ephumeleleyo kunye neqakamba kwi-analytics yakho): Nokuba uthabathe amanyathelo okufunda iintsingiselo kwaye uzisebenzise, ​​okanye ushiye ngasemva. Kule